3T ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း OnePlus - သတင်း Rule
3T ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း OnePlus
အဆိုပါ OnePlus 3T အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းသည်. အဆိုပါမထိုက်မတန်နှင့် finish ကိုကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အတူရှိလက်ျာဘက်တက်ဖြစ်, သတ္တုပုံစံဒီဇိုင်းစင်နှင့်ပင်တစ် 5.5in screen ကိုနှငျ့အတူရှိ၏, တကနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့တစ်စီမံခန့်ခွဲစမတ်ဖုန်းရဲ့.
အသစ်, တိုးတက် Android device ကိုအ OnePlus အတော်လေးအချိုမဖြစ်စေခြင်းငှါ,3ခဲ့, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးနှင့်အတူလက်ျာဘက်ထရှိနေတုန်းပဲင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “3T ပြန်လည်သုံးသပ် OnePlus: ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်း” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 5th, ဒီဇင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ OnePlus 3T အချို့သောသော့ချက်ဒေသများအပေါ်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အလွန်ကောင်းသောစမတ်ဖုန်းရန်အသေးအဖွဲ update ကိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မူရင်းခဲ့အတော်လေးအ bargain မဟုတ်ပါဘူး.
သာအဆိုပါတရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ အ OnePlus ပြန်လွတ်လာ3ဇွန်လအတွက်, ဒါပေမဲ့ပြီးသားကအစားထိုးခဲ့. အဆိုပါ 3T ၎င်း၏နောင်တော်မှလက်တွေ့ကျကျတူညီသည်, ပြင်ပအပေါ်အနည်းငယ်အရောင်ကွာခြားချက်အမှုအရာပြောင်းလဲပြီသောသာနိမိတ်လက္ခဏာ.
OnePlus ပူးတွဲတည်ထောင်သူတဲ့ Carl pei အဆိုအရ, ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီ - ကုမ္ပဏီကတူညီအထုပ်မှာပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်း fit မယ်လို့ရှိနိုင်ပါတချို့တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်, ပိုမိုမြန်ဆန် processor နှင့်တိုးတက်လာသောကင်မရာများ - ဒါကြောင့်အစားထက်တစ်နှစ်လောက်စောင့်ဆိုင်း, ဒါကြောင့်ရိုးရိုး OnePlus အစားထိုး3အ 3T နှင့်အတူ.
ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစမတ်ဖုန်း၏စျေးနှုန်းလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်, ပစ်လွှတ်အပေါ်သူ့ရဲ့မူရင်း£ 309 ကနေ, £ 399 တစ်စတင်စျေးနှုန်းမှ£ 329 ၎င်း၏ပို့စ် Brexit ဆန္ဒခံယူပွဲငွေကြေးညှိနှိုင်းမှုကတဆင့်. သစ် 3T အဟောင်းထက်£ 70 ကပိုတန်ကြေးရှိ 3?
အဆိုပါသေနတ်သတ္တုမီးခိုးရောင်အရောင် OnePlus ၏မီးခိုးရောင်ထက်အနည်းငယ်မဲမှောင်သည် 3. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တစ်ကွေးကျောနှင့်ဘီဗဲလ်နှစ်ဖက်နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့လူမီနီယမ်ခန္ဓာကိုယ် 3T နှင့်အတူပေါ်ကောင်းသောခြောက်လအဖြစ်တိုင်းနည်းနည်းခံစားရပါတယ်. ကိုင်ဖို့ရန်အလွန်ကောင်းတဲ့စမတ်ဖုန်းက, မထိနဲ့တန်ဖိုးထား: အ 3T £ 400 ထက်အများကြီးပိုကုန်ကျတဲ့စမတ်ဖုန်းများ၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရှိပါတယ်မျှသံသယရှိပါတယ်.
အဆိုပါ 5.5in 1080p AMOLED မျက်နှာပြင်သည်ကြီး. အခုဆိုရင်သင့်အကြိုက်မှအရောင်သေံစိတ်ကြိုက်နိုင်, box ကိုထဲကလူအများစုဖြစ်သော Samsung ရဲ့ Galaxy S7 အဖြစ်အခြား AMOLED-သုံးပြီးဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုသိမ်မွေ့အရောင် mode ကို OnePlus အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း.
တစ် pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ 401 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per, အ 3T ထိပ်တန်းအဆုံးကို Android ပြိုင်ဘက်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမဟုတ်ပါဘူး, တူညီတဲ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိသည်သော, ထို့ကြောင့် side-by-side တစ်ဦးနှင့်အတူ 534ppi Google က Pixel XL ဒါကြောင့်အနည်းငယ်လျော့နည်း pin ကိုချွန်ထက်ကြည့်. အများစုမှာအတူပျြောရှငျလိမျ့မညျ, က virtual reality application များအတွက်သိသာဆင်းရဲတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း.
အဆိုပါကျဉ်းမြောင်းတဲ့ bezel ကစီမံခန့်ခွဲကိုပင် 5.5in screen ကိုအတူတပေးအပ်လုပ်ပြန်ကွေး. It isn’t quite as narrow as the current king of the large screen inatiny bodied phone, the Samsung Galaxy S7 Edge, but it is 1mm narrower than the Pixel XL.
The alert slider allows you to quickly switch between silent, ဦးစားပေးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအကြောင်းကြားစာများ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
OnePlus’ excellent notification slider completes some well made buttons on the left and right side of the phone.
Screen ကို: 5.5အပြည့်အဝနဲ့ HD AMOLED အတွက် (401ppi)
သိုလှောင်ခြင်း: 64 သို့မဟုတ် 128GB
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0.1 OxygenOS 3.5
ကင်မရာကို: 16OIS နှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာကို, 16အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, dual-Sim, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ကို USB-C ကို, ဘလူးတုသ် 4.2 နဲ့ GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 152.7 x က 74.7 x က 7.35 မီလီမီတာ
Dash Charge through USB-C forarapid fill up. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The OnePlus 3T has the same amount of memory and storage as its predecessor, but hasaslightly more powerful processor: အ Snapdragon 821 from Qualcomm, which is used in other high-end Android smartphones including the Pixel XL.
It feels snappy, but not quite the fastest smartphone on the market: ထို ဟွာဝေး Mate 9. It doesn’t feel any faster than the OnePlus 3, but the battery did last longer between charges. It hasaslightly larger battery, and software refinements over the last six months have made the experience smoother.
Used as my primary device with five hours of listening to music through Bluetooth earbuds, သုံးနာရီ app များကို browsing သို့မဟုတ် အသုံးပြု. သုံးစွဲ, ရံဖန်ရံခါဂိမ်းနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီး, သောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, the OnePlus 3T lasted around 36 စွဲချက်အကြားနာရီ.
The big improvement over the3has been in standby performance: where the3ကျဆင်းသွား 12-16% overnight, the 3T dropped only 4%, which is very good compared to most of the competition.
Charging the battery is fast, လွန်း. With OnePlus’ proprietary Dash Charge power adapter and cable it took just over 70 minutes to reach 100% from zero charge, which is right up there with the fastest charging smartphones. It can also be charged using pretty much any USB charger, but atastandard rate.
Two sim slots allow you to have two numbers connected to one phone. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The fingerprint scanner on the front, which doubles asahome button, မြတ်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်င်, accurate and works great.
OxygenOS 3.5 isaslightly tweaked version of Android6Marshmallow with some of the features of Android7Nougat. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
But the 3T ships with OxygenOS 3.5, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ရဲ့ Android အပေါ်အခြေခံပြီးသော 6.0.1 Marshmallow, not the newest Android7Nougat. OnePlus expects to have an update to Nougat available before the end of the year. သ, it has not had the best track record for speedy software updates, but has got better over the last few months.
The camera is good and the camera app easy to use. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နှိုင်းယှဉ်, အ 5.5in Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge costs £520, ထို Google Pixel XL costs £719, ထို ဟွာဝေး Mate9costs €699 (£589) ပြီးနောက် Apple က iPhone ကို7နောက်ထပ် costs £719.
It isn’t quite the bargain the OnePlus3ခဲ့, and I don’t think it’s worth £70 more than the previous model. But with currency fluctuations the way they are and the pound down against the US dollar it’s not all about profit. It is still excellent value for £400 when ပန်းသီး နှင့် Google ရဲ့ equivalent smartphones, that boast less storage, cost £719.
အကောင်းအဆိုး: All-သတ္တု, အလွန်ကြီးစွာသောလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ, ကောင်းသောမျက်နှာပြင်, အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း, ကောင်းသောကင်မရာများ, မြတ်သောအကြောင်းကြားစာ slider ကို, dual-standby နှင့်အတူ Dual-Sim, ပြိုင်ဘက်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာ
Cons: not quite as cheap as it once was, အဘယ်သူမျှမဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီ, ချဲ့သိုလှောင်မှုကိုအဘယ်သူမျှမ, Non-Dash တာဝန်ခံအာဏာကို Adapter ကမှနှေးနှေးအားသွင်း, VR များအတွက်မျက်နှာပြင်အနိမ့် res, not yet running Nougat
The curved back feels great in the hand and produces some interesting reflections and colours from different light sources. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
OnePlus3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစျေးနှုန်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းကို
ဟွာဝေး Mate9ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: big screen, long battery life and dual cameras
ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်: Sub-တန်းတူဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုကျောကျင်းပမြင့်မြင့်အတန်းအစား Phablet ကို
Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge ပြန်လည်သုံးသပ်: ဒီရိုက်ဖို့စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်
iPhone ကို7Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: 2014 called – it wants its phablet back
← အမေဇုံ: Echo Dot ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို Windows Laptop ကိုသင်၏ Mac ကိုဖလှယ်ရန်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်? →